Ballaarinta abuurka avocado wuxuu wax u dhimayaa deegaanka | Saadaasha Shabakadda
Ma ka mid tahay kuwa ku raaxeysta cunista miraha kuleylaha? Way macaan yihiin, sax? Cambaha, babayga, midhaha canabka ... iyo dabcan avocados, oo isticmaalkooda adduunka uu sii kordhayo, taas oo ah warar xiiso leh laakiin aan gebi ahaanba fiicnayn. Xaqiiqdu waxay tahay, iyadoo baahi weyn loo qabo, beeralaydu waxay u baahan yihiin dhul badan oo la beero, marar badanna taas macnaheedu waa kaymaha dal waa la xaalufiyey, Iyadoo intaas oo dhami tilmaamayso.
Mexico waa hormoodka soosaarida geedaha avocado, oo goosashadoodu u taagan tahay 30% wax soo saarka adduunka, iyo sidoo kale ficil ahaan dhammaantood waa loo dhoofiyaa, gaar ahaan Japan, Faransiiska, Kanada iyo Mareykanka. Spain iyo Holland sidoo kale wax badan ayey ka iibsadaan; aad ayey u badan yihiin oo waa labada dal ee Yurubta ah ee inta badan dibadda ka soo dhoofsada.
Haddii isbeddelku uusan isbeddelin, waxaa lagu qiyaasayaa in isticmaalka uu kordhin doono in ka badan 10% sannadaha soo socda, sidaas darteed Mexico waxay isku dayeysaa inay la qabsato koritaanka baahida. Sidee bay taas u sameeyaan? Sida ay ku sharaxayaan fiidiyoow lagu daabacay HadaThisNews, beeraleyda waa xaalufinta keymaha geedaha in lagu beero avocados. Tani waa cabbir lama huraan ah oo saameyn ku leh deegaanka.
Faracyada geedaha ayaa sameeya kordhiya kaarboon laba ogsaydh jawiga, sii xumeynta isbeddelka cimilada xitaa inbadan. Intaa waxaa sii dheer, avocados waxay isticmaashaa biyo aad uga badan kuwa kaymaha geedaha, halkaas oo habka boqoradda balanbaalintu u gabbato inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Haddii aysan jirin kaymo geed, balanbaalistani way baabi'i kartaa.
Marka, maxaa la sameeyaa? Fikradayda, waxa ugu habboon waxay noqon laheyd in la helo isku dheelitirnaan. Kuma sii socon karno sidan. Markaan u dhaqaaqno inaan wax iibsanno, kaliya ma iibsaneyno, laakiin waxaan sidoo kale dhaheynaa waxaan xiiseyneynaa badeecooyinka qaarkood; Hadday baahi weyn u qabaanna, waxaa lagu soo saari doonaa baaxad weyn si aan qofna uga maqnaan la’aanta. Taasina waxay cawaaqib xumo weyn ku yeelan kartaa meeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Ballaarinta abuurka avocado wuxuu waxyeeleeyaa deegaanka
Maria HELI Mantilla dijo
Warbixinnada waa kuwo la yaab leh, oo aniga iga walwal badan,
Jawaab María NELLY Mantilla
Shishmaref, waa magaaladii ugu horeysay ee u guurto isbadalka cimilada darteed